Ọ dịghị onye nwere ike ime mmadụ niile obi ụtọ; onye ga - emeri ga - acho inwe otu onu iji mee onye obula gaghi enweta ya: otu ihe doro anya “enweghi ike ime m obi uto onye obula, ma ndi nile huru m n’anya, ahurum gi n'anya nke ukwuu na ndi ahụla m n'anya, ahụkwara m gị n'anya n'ihi nsogbu ”
Site na: KongoLisolona: Septemba 5, 2020 00: 45 Enweghị asịsa
E nwere ndị ka m mma, dị nnọọ ka ndị pere mpe ma ọ bụ ndị ka m njọ mais il n’y a pas deux exactement comme moi. N’ihi ya, hụ m n’anya dị ka m bụ. Nabata m dịka m siri dị, ka m na-egosi gị onwe gị na gị onwe m.
Nous sommes différents, mais nous pouvons oublier nos différences et nous nous focaliser sur ce qui nous unit, sur ce que vous avons en commun « L’humanité ». N’ihi na ihe na-eme ka anyị dị n’otu dị mkpa karịa ihe na-ekewa anyị. Ihe na-eme ka anyị dịrị n’otu karịa ihe niile, "C‘est la sympathie mutuelle, c’est l’amour ! »
Ilu: Site, KL
Ọkt29 04: 58